Sary avy amin'i Artradol
Ny tsimokaretina Arthraldol dia zava-mahadomelina an'ny vondrona chondroprotectors. Tena ilaina amin'ny fitsaboana aretina amin'ny rafi-pitiliana ny musculoskeletal. Ny zava-mahadomelina dia manara-maso ny fizotry ny metabolika ao amin'ny vatan'ny hoditra.
Fampahalalana momba ny fampiasana an'i Artradol
Araka ny torolalana, ny tifitra an'i Artradol dia natao hamerenana ny vatan'ny karazam-borona ary hiaro azy ireo amin'ny karazana fahasimbana isan-karazany. Tsy toy ny zava-mahadomelina manohitra ny fanafody tsy marim-pototra, fa tsy miteraka vokatra haingana ireo tsindrona ireo. Ny tanjon'izy ireo dia ny manafoana ny antony fototry ny fahatsapana hafahafa, ary tsy hoe manafina fotsiny ny fanaintainana. Ny fiantraikan'ny fitsaboana amin'ny arthralona dia mitohy na dia volana vitsivitsy monja aorian'ny fitsaboana azy aza.
Ny fototry ny zava-mahadomelina dia solifara chondroitin. Io tsy fahampian-tsakafo io dia manala ny asan'ny enzymes izay manimba ny karazam-borona, ary mandray anjara amin'ny fananganana karazam-borona mahasalama.
Indraindray i Artradol amin'ny fakana rano dia azo ampiasaina amin'ny rano:
degenerative kapila aretina;
osteoarthritis , izay nisy fiantraikany be loatra;
Ahoana ny fomba famongorana tsara Arthraldol amin'ny rano ho fampidirana?
Arthrodol dia natao hampidirana tsindrim-borona. Talohan'izany, tokony hohalavirina ny fanafody. Mba hanaovana izany dia mila mampifangaro ny ampahatelon'ny rongony miaraka amin'ny mililiteran'ny rano ianao. Ny vahaolana vita dia ahitana 100 mg ny vatana mavitrika.
Ny fizotry ny fitsaboana dia voafaritra tsirairay, fa matetika dia misy 25 ka hatramin'ny 35 ny injections. Ny fanaovan-jiro dia atao isan'andro. Enim-bolana taty aoriana dia asaina manome fitsaboana faharoa miaraka amin'i Arthrodol.
Analogues of injections of Artradol
Raha manana alèjy na marary tsy misy fialan-tsasatra amin'ny fanafody ilay marary, dia mety hosoloina izany fomba izany:
Inona no tanjon'ny Mildronate, ary ahoana no fomba handraisana ny zava-mahadomelina?
Ahoana ny fomba famafana ny fireharehana?
Fitsaboana psoriasis amin'ny ultraviolet
Hernia diaphragmika - soritr'aretina sy fitsaboana
Ny fanaintainana eo amin'ny faritry ny fo
Afaka manome kiwi ho an'ny renim-pianakaviana ve aho?
Ahoana no handraisana mofomamy amin'ny sôkôla
Sinupret nandritra ny fitondrana vohoka
25 tsara rafitra izay toa tonga lafatra ny zava-drehetra
Ny Melania Trump dia nanaporofo indray fa fantany ny fomba hisafidianana ny akanjony manokana
Shibori - maîtrise
Ahoana no hanatsarana ny rambony?
Riker ny vehivavy
Azoko atao ve ny manasa gloves?
Fialan-tsasatry ny Beach tamin'ny Novambra
Ahoana no hanaovana trano?